यस्तो छ ‘नेपाल आइडल’का नाममा दिउँसै ‘लुटतन्त्र’ : जसले पैसा खर्च गर्न सक्यो उही विजेता (भिडियो सहित) |
काठमाडौं । अहिले नेपालमा ‘नेपाली आइडल’ को निक्कै चर्चा चल्न थालेको छ । नेपालको एक टेलिभिजनबाट प्रसारित नेपाली आइडलको चर्चा चले पनि यसको भित्री कथाभित्र जाने कोसिस कमैले गरेका छन् । भित्री कथा बुझ्नुभन्दा पनि बाहिरी रूपमै चर्चा गर्न सजिलो भएकाले पनि यसको सतही चर्चामै सर्वसाधारण रमाउने गरेका हुन् । तर, नेपाली आइडलको नाममा यत्ति ठगी भएको छ कि त्यसको हिसाब किताब नै छैन । जनताले पठाउने ‘एसएमएस’ अर्थात् ‘सर्ट म्यासेज सर्भिस’ को सङ्ख्याले नेपाली आइडल छान्ने भन्दै जनताको एसएमएसको सङ्ख्या बढाउने काम भइरहेको छ । जनताले जुन प्रतियोगीलाई बढी एसएमएस गर्छन् उही नेपाली आइडल हुने भनेपछि यसभित्रै विभिन्न कुराहरू लुकेको सजिलै थाहा पाइन्छ । हेर्नुस् भिडियो
सङ्गीतबारे थाहै नहुने व्यक्तिको भोट वा एसएमएसको सङ्ख्याले नेपाली आइडल बनाउने भनिएको छ । सङ्गीतको बारेमा अनजान व्यक्तिले सफल गायक कसरी चिन्ने ? एसएमएसको माध्यामबाट नेपाली आइडल छान्नु भनेको पैसाको खेलभन्दा अरू हुनै सक्दैन किनभने एउटै नम्बरबाट अनगिन्ती एसएमएस पठाउने मिल्ने प्रणाली छ, जसले धनीले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर उसले एसएमएस गर्न सक्छन्, उ विजेता बन्छ । पैसाकै भरमा नेपाल आइडल बन्न पाउने कस्तो अचम्मको प्रतियोगिता । जसले पैसा खर्च गर्न सक्यो उही विजेता । मानौँ, नेपाल आइडलमा भाग लिनेको आफन्त कोही भएनन् वा उसले पैसा खर्च गर्न नसक्ने हो भने उ विजेता बन्दैन किनभने उसँग पैसा छैन । उक्त टेलिभिजनका अनुसार पैसा नहुनेहरु प्रतियोगिताको अन्तिममा पुग्न सक्दैनन् । उसले जनताको एसएमएस पाएनन् भने उनलाई अगाडि बढ्नै दिइँदैनन् किनभने जनताको एसएमएस उसँग छैन । जनताको एसएमएस उनले पाएनन् भन्नुको अर्थ जनताले एसएमस गरेनन् र टेलिभिजनले फाइदा पाउन सकेन ।
हो, ठगी अभियान यहाँबाट सुरु हुन्छ । जनताले प्रतियोगीलाई एसएमएस पठाएनन् भन्नुको अर्थ जनताले उक्त टेलिभिजनलाई पैसा दिएनन् भन्नु हा । दर्शकले प्रतियोगीलाई भोट गर्नु वा एसएमएस गर्दा प्रतिएसएमएस ६ रुपैयाँ २० पैसा लाग्छ । अब एउटा एसएमएस गर्दा यति पैसा के हो र भनिन्छ तर लाखौँले एसएमएस गर्दा टेलिभिजनले कति रकम लिन्छ ? पैसा हुनेले लाखपटक एसएमएस गरेर चर्चामा आउन सक्छन् । हुनेका लागि ६ लाख २० हजार रुपैयाँ केही पनि होइन तर नसक्ने गरिबका लागि त्यत्ति रकम जिन्दगी भरको कमाइ हो । अब धनीले मात्र भाग लिने र धनीहरुबीच मात्र प्रतियोगिता गराउने हो भने नेपाल आइडल नाम किन राखियो ? प्रश्न उनीहरूलाई गर्नै पर्ने भएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालकले प्रतियोगीहरुलाई बढीभन्दा बढी मत दिन उक्साउने गर्छन् । त्यति मात्र नभएर टेलिभिजनले प्रतियोगीलाई मत माग्न पनि आग्रह गर्छन्, प्रतियोगीहरु पनि विजेता बन्ने आसामा जनतासँग भोट माग्छन्, उनले आफ्ना आफन्तहरूलाई भोट गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । यसरी भोट माग्नुको बाहिरी कुरा भोट भनिए पनि भित्री रूपमा चाहिँ ‘टेलिभिजनलाई पैसा देऊ है’ भनिएको हो । एक मिनेटसम्म कुरा गर्दा २ रुपैयाँ लाग्ने तर एउटा एसएमएस गर्दा ६ रुपैयाँ २० पैसा लाग्छ । एउटा एसएमएसका लागि यत्ति धेरै पैसा तिर्नु परे पनि राज्य चुपचाप देखिन्छ । उक्त टेलिभिजनले राज्यको माथिल्लो तहमा पनि पैसा पु¥याएरै चुप लागेका हुन सक्छन् । मुलुकमा के भइरहेको छ ? कसको आचरण कस्तो छ ? कसले के गर्दै छ ? भन्ने कुराको हिसाबकिताब राख्नुपर्ने माथिल्लो निकाय राज्य हो । राज्य सञ्चालनका लागि जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिँदै आए पनि उनीहरूबाट राज्यमा अमन चयन कायम हुन सकेको छैन ।
प्राकृतिक नियम अनुसार अन्याय गर्नेभन्दा अन्यायप्रति आँखा चिम्लने व्यक्ति अन्यायकर्ताभन्दा बढी अपराधी हुन् । त्यसमाथि टेलिभिजनले एक एसएमएसमा त्यत्ति धेरै पैसा असुलिरहँदा पनि राज्य रमिते भएको छ । सोझासाझा जनताले आफन्तलाई जिताउने एसएमएस गर्ने गरेका छन् । यत्तिका महँगो शुल्क लाग्छ भन्ने कतिपयलाई थाहा छैन । सर्वसाधारणको अनजानको फाइदा लिनका लागि टेलिभिजनले भोटिङ गर्न आह्वान गर्छ तर त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा टेलिभिजनले लिइरहेको हुन्छ । प्रति एसएमएसका लागि लाग्ने रकममा दूरसञ्चार शुल्क र कर कट्टा गरी ५ रुपैयाँ बचत हुन्छ । प्रति एसएमएस ५ रुपैयाँ बटुल्दै टेलिभिजनले करोडौँ कमाउने गरेको छ । अरूको भावनासँग व्यापार गरे पनि प्रशासन चुप बस्नुलाई कतिपयले भने मिलेमतोकै कारण नबोलिएको भन्ने पनि कम छैन ।
प्रत्यक्ष रूपले दर्शक र प्रतियोगीको ‘सेन्टिमेन्ट’ जितेर एसएमएस गर्न लगाए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको रकम लुट्नेभन्दा अरू काम भएको छैन । जे भनिए पनि प्रतियोगीको आफन्तले गर्न सक्ने खर्चको आधारमा विजेता बनाइनु युक्तिसंगत छैन । प्रतिभाशाली भए पनि पैसा खर्च गर्न नसक्नेलाई प्रतियोगीलाई बाहिर राखेर छानिएको वा घोषणा गरिएको विजेता साँच्चै सम्बन्धित विधामा पोख्त छन् त ? केही वर्षअघि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित छमछमीमा विजेता बनेकी अनुजा अग्रवाल तथा दोस्रो र तेस्रो भएका प्रतियोगीहरु अहिले देखा परेका छैनन् तर चौँथो बनेकी पार्वती राई अहिले नेपालकै चर्चित नर्तकी बनिन् । अग्रवाल मारवाडीकी छोरी भएकाले उनका अभिभावकले पैसा खर्च गर्न सक्दा उनी छमछमीको उपाधि जितिन् तर उनी नेपाली नृत्य संसारमा जम्न सकिनन् । त्यसैले जनताको मत भन्दै पैसा बटुल्ने र ठगी गर्ने कार्य भइरहेको छ । तर, यो ठगी अवैध नभएर वैध ठगी भइरहेको छ ।
अब रह्यो जनताको मतको कदर । जनताले जे जति भोट हाले पनि त्यसको यकीन तथ्याङ्क टेलिभिजनले लुकाउने गरेको छ । उसले सुरक्षित र बाहिर पठाएका घोषणा गर्दै आएको छ । जनतालाई वा दर्शकलाई कसले कति भोट प्राप्त गरे ? त्यसको जानकारी लुकाउनु भनेको सूचना लुकाउनु हो । टेलिभिजन आफैँ सञ्चार माध्याम भएको हुनाले उसले सूचना लुकाउन पाउँदैन । सूचना लुकाएर गरिएको प्रतियोगिताको निष्पक्षतामा माथि नै प्रश्न गर्ने प्रशस्त छन् । मुलुकमा लुट मच्चिए पनि राज्य भने रमिते बनिरहेको देखिन्छ । जनताले भोट गरेको सङ्ख्या जनतालाई सुनाउनुपर्छ । प्रतियोगीले चाह्यो भने कुन नम्बरबाट कति एसएमएस आयो ? त्यसको जानकारी प्रतियोगीलाई दिनुपर्छ । पुरस्कार ठुलो भएको भन्दै जनता वा दर्शक ठग्ने टेलिभिजनमाथि कारबाही गर्न राज्य किन हिच्किचाउँदै छन् ? यो चाहिँ ठुलो प्रश्न हो ।
व्यापारमा बढीमा कति प्रतिशत फाइदा खान मिल्छ भन्ने निश्चित हुन्छ तर यो प्रतियोगितामा टेलिभिजनले कति प्रतिशत नाफा लिँदै छ ? यसको जानकारी दर्शकलाई छैन भने यो दिउँसै लुट हो । यसलाई वैध लुट भनिन्छ । समाजका टाठाबाठाहरुले सर्वसाधारणलाई ठग्दै छ भने राज्यले ठगीमाथि कारबाही चलाउनै पर्छ । अनेकौँ नाममा पहुँचवालाहरुले नै सर्वसाधारणलाई ठग्ने हो भने गरिब जनतालाई देश निकाला गर्दा उत्तम हुने कतिपयको मत छ । यही एसएमएस सेवाबाट जनता ठग्न व्यक्ति गरिब थियो भने अस्ति नै उ जेलको बासमा पुग्ने थियो तर टेलिभिजन सञ्चालक हुनाले उनले जनता ठग्ने मौन स्वीकृत राज्यबाट पाइरहेका छन् । अन्ततः यो मुलुक धनी र पहुँचवालाको मात्र बनेको छ । तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकबाट नयाँबाटोडटकमले लेखेको समाचार
२०७७, २७ आश्विन मंगलवार १४:०९
क्रिश्चियनको पैसामा ‘जातको प्रश्न’ ? राजेश हमालले कार्यक्रम छोडेर माफी माग्नुपर्ने अवाज
२०७७, २७ आश्विन मंगलवार १२:३३